Aloe vera, tsime rehudiki hweMayans - AFRIKHEPRI
Aloe vera, tsime rehudiki hweMaya
Chenjerera Kubudirira Kana Kufa (2006)
wednesday, chokwadi 1, 2020
Muti weAloe vera
L 'aloe vera kana aloe is a chirimwa zvisingabviri pasina shina, takapihwa hunhu hunoshamisa. Isu tinounganidza muzvikamu zvakasvibira, iyo yakajeka pulp inotaridzika sejel ine maitiro ekurapa uye mukushandiswa kwemukati sekushandiswa kwekunze. Cancers, eczema, problèmes digestifs chroniques… L’aloe vera semble avoir des vertus pour tous les maux (dans le cadre d’une prise quotidienne des médicaments prescrits par le médecin et après lui avoir demandé conseil quant au risque d’interactions entre ces derniers et l’aloe vera).
Aloe vera, chirimwa chinoshamisa?
Aloe vera, chirimwa chine masimba mazhinji
Haingori chete inomutsa kudzivirira kwemuviri, kuporesa, asi inoitawo seanorwisa mabhakitiriya uye anorwisa-kurwisa. Aloe vera inosimudzira kubviswa kwehupfu uye inogadzirisa maronda emudumbu uye kurwadziwa mudumbu. Uye zvakare, chirimwa ichi chinoshamisa chinokurudzirwa kune vanhu vane chirwere cheshuga, uye vanhu vanotambura nechirwere chekurwara, kupomhodza, matambudziko emoyo ...
Muchidimbu, aloe vera chaihwo chaihwo hupamhi remishonga: inogadzira zvinhu zvakawanda zvinoshanda, zvinosanganisira zvicherwa, maemymes, mavhitaminzi uye mucopolysaccharides, sezvatichaona.
Iko kune mazana matatu emhando dzealoe. Iyo inonyanya kushandiswa ndeyechokwadi aloe vera nekuda kwekubatsira kwayo uye kunyanya kuve nyore kwayo kurimwa. Native kuSouth Africa, aloe vera inorimwa pasi rese, kunyanya muSpain, Mexico asiwo kumaodzanyemba kweUnited States.
Mashizha acho akatetepa, akareba uye akaganhurirwa. Kubva pakati inokwira inflorescence ine yakawanda yero, tube-yakaita maruva. Pakupera kwamakore mana kusvika mashanu, iyo cactus inosvika anenge mita imwe: imwe inogona kutanga kutora mashizha ayo kugadzira mishonga kana zvizoro.
Iwo mafambisirwo emishonga iripo saPliny Mukuru, Aristotle kana Hippocrates anga atoona hunhu hwakawanda hweichi chirimwa. Ivo vaishandisa kunyanya ku:
Kuvandudza ropa rekuvhara ropa,
Kubatsira matumbo zvisingagoni kuitika,
Poresa maronda uye maronda,
Pamusoro pemigumisiro yayo kune gandazvose kuporesa nekuita kuti rive rakanaka.
Kunze kwezvo, Cleopatra haana kuzvinyima iye oga oga anoshamisa eichi chirimwa kuti akwanise ngano yake runako !
VaMaya vakatumidza chirimwa ichi tsime rehudiki uye "tsime reudiki."
Shizha reAloe Vera rine zvinopfuura makumi manomwe neshanu uye mazana mazana emamwe maumbirwo, pamwe nemakumi maviri emaminerari, 75 amino acids uye gumi nemaviri mavhithamini.
L’aloe vera est à éviter lors de la grossesse et de l’kudyisa uye haifaniri kupiwa kune vana pasi pezera re 6.
Aloe vera inochengetedza muviri kubva mukati, kunyanya nekuchenesa gadziriro yemukati uye iyo yekurapa turakiti.
Zvimwe zvigadzirwa zvealoe vera zvinosimudzira kushanda kwakanaka kwemetabolism nekupisa mafuta uye kusimbisa kudzivirira kwemuviri.
Uye zvakare, nekuda kwekushandisa kwayo pakuporesa, vamwe maIndia vakatoshandisa aloe gel zvakananga pamaronda akazaruka, vasina kutanga vaturika. Izvi zvaitendera kurapa kwakanyanya izvo ,zve, zvakasiya zvakadarikidza kupfuura zvigunwe.
Aloe inofambisa maseru kutsvagirazve uye yakanaka hydration yeganda
Aloe vera muto kana jira inogona kuiswa mune yekukuvara nekuda mutambo uye inoshanda sechirevo chekurapa
Cette chirimwa est ainsi conseillée en cas de prurit, d’eczéma, de petites coupures, d’irritations, de boutons de fièvre, piqûres d’insecte, pellicules, cheveux abîmés, chute de cheveux, acné, cellulite…
Mazuva ese, aloe vera inopa kuchinjika uye kupfava kune yakakuvadzwa kana yakaoma ganda.
NB: ndiyo iyo aloe vera barbadensis miller iyo yatinogona kudya pasina njodzi (uku tichiremekedza madhesi).
100% Natural Aloe Vera Gel - Yakanakisa moisturizer yeFace & Muviri Bvudzi - Kunyaradza Mushure mekubviswa kwebvudzi - Pombi Bhodhoro 200 ml
2 nyowani kubva ku € 14,79
Tenga 14,79 €
kubvira June 30, 2020 5:51
Yakagadziriswa Kubva kuFESESI NATIVE JUICE - Organic Aloe Vera - Pfuma chaiyo yezvisikwa uye inofanirwa kune ese marudzi eganda!
YAKAITWA COLD kuchengetedza hupfumi hwayo mucilage, mavitamini uye zvinovaka muviri.
100% NEMAHARA ZVINOGONESA, yakawanikwa kubva kune imwe aloe muto, yakawanikwa chete kubva kutsva yefetera reshizha kuchengetedza zvese zvinomera zvinomera zvinoshanda.
KUZVINYA KWAKANAKIRA KURA reganda: inozorodza, hydrating, ine hutano, inovandudza ... Inomutsiridza uye inonongedza marudzi ese eganda, kunyanya akura, akaonda, akaoma ganda, asi zvakare anonzwa ganda uye dambudziko ganda.
ZIVA KUTI URI KUPEDZESA ZVAKANAKA - masimba anoshamisa paganda akawanda ezvekurapa uye ezvekushongedza zvinhu
Vakagadzira zvishandiso zve-smartphone kuti vaone AIDS uye chirwere
Zvakanaka zve okra
Kusagadzikana kwechitendero uye tsika tsika